Oukitel C8 ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော entry-level terminal | Androidsis
Francisco Ruiz | | မိုဘိုင်း, NOTICIAS, Oukitel, reviews
Android ကိုအခြားမိုဘိုင်း operating system များနှင့်ကွဲပြားခြားနားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသဘောတူထားသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာအလွန်ကျယ်ပြန့်သော၊ ကြီးမားသောကတ်တလောက်သို့မဟုတ် Android terminal အသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သုံးစွဲသူများအားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလွန်အဆင့်မြင့်သောစျေးကွက်အကွာအဝေးအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ High-end တွင်သာမဟုတ်၊ ကန့်သတ်ချက်ရှိသောအထက်တန်းလွှာများအတွက်သာဖြစ်သည်။
ဒီနှင့်အတူဤအမှု၌ Oukitel C8 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းငါဝင်ပေါက်ဂိတ်တစ်ခု၊ လူငယ်ဂိတ်တစ်ခု၊ ခေတ်မီပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုလိုလူထုအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုမင်းကိုငါ ၆၀ ကျော်ကုန်ကျတဲ့ဂိတ်တစ်ခုနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုလားတယ်။ ယူရိုနဲ့ငါတို့ကအင်တာနက်ကိုလှန်ဖို့လုံလောက်တဲ့စွမ်းအားထက်ပိုပေးလိမ့်မယ်၊ ငါတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေ၊ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းတွေကနေတဆင့်ဆက်သွယ်တာ၊ ဂရပ်ဖစ်ပါဝါနည်းနည်းပဲလိုတာဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်အခြေအနေမှာပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေတောင်ရိုက်တယ်။ ကောင်းမွန်သောတောက်ပမှုသည်ကျွန်ုပ်အားဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဤ Oukitel C60 ၏ပေါင်းစပ်ကင်မရာများမှငါအများကြီးမျှော်လင့်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
1 Oukitel C8 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 Oukitel C8 ၏အကောင်းဆုံး
3 အဆိုးဆုံး Oukitel C8
Oukitel C8 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
operating system မည်သည့်စိတ်ကြိုက်အလွှာမရှိဘဲ Android 7.0 Nougat
ဖန်သားပြင် ၅.၄ လက်မ IPS LTPS 5.5 x 640 Pixel Resolution 1280: 18 အချိုးအစား9dpi Dragontrail ကာကွယ်မှုနှင့် 260D နည်းပညာတို့ပါရှိသည်။
Processor ကို ၁.၃ Ghz အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းတွင် Mediatek MT6580A Quad Core
GPU ကို 400 Hz မှာမာလီ2MP60
ရမ်2Gb LPDDR3
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း ၁၆ ဂစ်ပါရှိပြီး ၁၁.၃၃ Gb အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အပြင် multimedia သိုလှောင်မှုအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် internalSD သိုလှောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန် MicroSD ကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးထားသည်။
နောက်ကင်မရာ HD ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်သည့် 8 mpx CMOS 1280 x 720 30 fps နှင့် FlashLED နှစ်ဆပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောအသံဖမ်းခြင်း - ဓာတ်ပုံ resolution 3264 x 2448 pixels ။
ရှေ့ကင်မရာ ရှေ့ FlashLED ပါ ၀ င်သော2mpx နှင့်ယခုတရုတ်ပုံစံ၏ဆိပ်ကမ်းမော်ဒယ်များပါ ၀ င်သည့်ယခုခေတ်အလှအပပုံစံ - ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း 640 x 480 pixel resolution ဓာတ်ပုံ 1600 x 1200 pixels ။
ဆက်သွယ်မှု Trio: Dual Sim Micro + Nano SIM + MicroSd - ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသောအခါ SIM ကဒ်နှစ်ခုသည် standby တွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ဒုတိယအကြိမ် SIM ကဆက်သွယ်မှုဖြုတ်ခြင်းသို့ပြောင်းသည် - ဂျီအက်စ်အမ် band - 850/900/1800/1900 - W-CDMA: 900/1900 / 2100 - UMTS / EDGE / GPRS / HSPA + ကွန်ရက်နည်းပညာ - Wifi နှင့် Wifi Hotspot - Bluetooth 4.0 A2DP - GPS aGPS နှင့် GLONASS - OTG - OTA - FM ရေဒီယို - MicroUSB 2.0
ဘက်ထရီ ဖြုတ် 3000 mAh
ရှုထောင့် 147 70.5 10.2 မီလီမီတာ
စြေး Gearbest သို့ ၆၈ ယူရို အမေဇုံချုပ်အပေါ် 79 ယူရို
Androidsis စာဖတ်သူများ၊ စာဖတ်သူများနှင့် Androidsisvideo YouTube ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုသူများအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်သော terminal ၏ရိုးရှင်းမှုကြောင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Oukitel C8ပထမနှင့်တစ်ချက်ကြည့်လျှင် terminal ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအချည်းနှီးသောစကားလုံးများဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေခြင်း မှလွဲ၍ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်နေရာတွင်မဆို ဦး ဆောင်သောနည်းပညာစကားလုံးများပါသောလိပ်များများစွာမပါရှိခြင်းကိုမြင်နိုင်ရန်စာရင်းတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းကျိုးရောဆိုးသောနှစ်မျိုးလုံးပါရှိသည်။ ငါထပ်ခါတလဲလဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိမ့်ကျသော Android ကိုအာရုံစိုက်သော terminal တစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် အသုံးပြုသူမှမှန်ကန်သောဆက်သွယ်မှုကိုမှန်ကန်စွာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ အင်တာနက်ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲရှာဖွေခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်များနှင့်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောဂရပ်ဖစ် ၀ န်ဆောင်မှုမလိုအပ်သောဂိမ်းကစားခြင်းများကိုရှာဖွေသည်။
ဤ Oukitel C8 ပိုင်စျေးနှုန်းအပိုင်းအစအတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်စေသည့်ကင်မရာများသည် !!!
ငါပြောလိုသည်မှာသင်သည်ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်တွင်တွေ့နိုင်သည့် Oukitel C8 ၏ဤသုံးသပ်ချက်သည် ၎င်းသည် terminal ၏ကင်မရာများနှင့်လုံးလုံးလျားလျားမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့မှသာသူတို့၏ကင်မရာများသည်မည်သည့်အသုံးချမှုမှမရှိဘဲမည်သို့မှတ်တမ်းတင်သည်ကိုသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီကင်မရာအကြား2mpx ပဲရှေ့ကင်မရာနှင့် 8 Mpx နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်အတူ။ Telegram လိုထူးဆန်းတဲ့ application ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ terminal ကအင်တာနက်ကိုဘယ်လိုလှည့်လည်နေသလဲဆိုတာကြည့်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပြီးပြီ။ အထူးသဖြင့် Plus Messenger ဒါမှမဟုတ်ပေါ့။ Tap Tap Dash လိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဂိမ်းများကိုသူဘယ်လိုရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာကိုတောင်ငါပြတယ်။ ဒီဂိမ်းကို Trigger2ဂိမ်းကိုဒီရိုးရှင်းတဲ့ terminal ထဲကိုရွှေ့လိုက်တာနဲ့အမှန်တကယ်အတော်လေးကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားနေပါတယ်။
Oukitel C8 ၏အကောင်းဆုံး
လူငယ်နှင့်ခေတ်သစ် finish ကို
IPS HD ကို + 18:9အချိုးအစားမျက်နှာပြင်
Dual SIM ကတ် Nano + Micro
မျက်နှာပြင် setting တွင်အလိုအလျှောက်တောက်ပ
အစားထိုး 3000 mAh ဘက်ထရီ
၄ မှ ၅ နာရီကြားမြင်ကွင်း
အဆိုးဆုံး Oukitel C8
လိုချင်သည်ထက်အများကြီးပိုပျက်ကွက်ကြောင်းတစ် ဦး ကလက်ဗွေဖတ်စက် !!!
On-screen ကို virtual ခလုတ်
RAM ကို2Gb
800 Mhz တီးဝိုင်းမရှိဘူး
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ Android 8 တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android 7.0 ကို Oukitel CXNUMX ကိုကြည့်ပါ
HTC U11 သည်ယနေ့ Android မှ Android Oreo သို့အသစ်ပြောင်းသည်